Dagaal ka dhacay Gobolka Bay
12 Nov 12, 2012 - 6:54:23 AM
Inta la ogyahay 10-qof oo u badan shacab ayaa ku dhintay dagaal iyo rasaas ay ciidamada Ethiopia ku fureen shacabka ku nool deegaanka Goof-guduud oo 30-km u jirta Magaalada Baydhabo ee Gobolka Bay.
Dagaalka u dhexeeyay Maleeshiyada Al-shabaab iyo Ciidamad Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay 6 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay, iyadoo afarta qof ee kalena ay ahaayeen dad shacab ah oo ay ciidamada Ethiopia Rasaas ku fureen.
Goobjoogayaal ku sugan Deegaanka Goofguduud oo uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid culus oo qaatay dhowr saacadood oo xiriir ah; dagaalka kadibna ay ciidamada Ethiopia rasaas ku fureen dadka deegaanka.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay inay dagaalkaas ku dileen ciidamo fara badan oo Ethiopian ah, ayna ku gubeen gaadiid ay wateen, balse dadka deegaanku ma aysan sheegin gaadiid la gubay, iyadoo Maleeshiyadii Al-shabaab ay isaga carareen halkii uu dagaalku ka dhacay.
Dagaalkan ayaa ku bilowday Markii Al-shabaab ay qarax ku weerartay Kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada Ethiopia kuwaasoo ka baxay Baydhabo kuna socday Degmada Bardaale oo ka tirsan Gobolka Bay.
Saraakiisha Maamulka Gobolka Bay ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid culus, balse aysan sheegin karin khasaaraha ka dhashay, waxayse xuseen in ciidamada Ethiopia ay rasaas ku fureen dadka ku nool Deegaanka Goofguduun ayna halkaas ku dileen dhowr qof oo shacab ah, kuwo kalena ay ku dhaawaceen.
Ururka Al-shabaab oo Degmooyin ka tirsan Gobolka Bay laga qabsaday Horaantii Sanadkan ayaa waxay dadaal ugu jiraan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen gobihii laga saaray, iyagoo dhowr jeer oo hore weeraro ku qaaday ciidamo Ethiopian ah.